Izinhlelo zokusebenza zokuqomisana ziyaqhubeka nokukhula e-Spain | Bezzia
UMaria vazquez | 22/06/2022 10:00 | Indlela yokuphila
Okulandwayo okujwayelekile kohlelo lokusebenza lokuthandana ikhule ngo-32% ekuqaleni kwalo nyaka ka-2022. Ukucwasa kulawa makhasi kuye kwancipha futhi abantu abaningi babona lezi zicelo njengenye indlela yokuhlangana nomuntu.
Amaningi alawa makhasi asebenza ngaphansi ama-dynamics asheshisiwe lapho kwanele khona ukuslayida isithupha sakho esikrinini ukusuka kwesokunxele kuye kwesokudla ukuze ukhethe i-aphoyintimenti elandelayo. Abanye banesigqi esikhululeke kakhudlwana, bakhethe amaphrofayili aqinisekisiwe kanye nethimba labantu eliphendula ngemuva kwesikrini.
Ubuwazi yini ukuthi thina bantu baseSpain singabo okwesithathu ezingeni ukusetshenziswa inthanethi ukuphola inthanethi kanye nezicelo? Sidlulwa kuphela i-United States ne-Brazil esilinganisweni, esisibeka phezulu eYurophu ekusetshenzisweni kwezinhlelo zokusebenza zokuphola. Kodwa, zinjani lezi zinhlelo zokusebenza futhi yiziphi ezidume kakhulu eSpain?
1 Kwabo bonke
2 Okudume kakhulu eSpain
El Ukunyuka Kwabantu Ababodwa, okuthi, ngokwedatha evela ku-National Institute of Statistics, isuke ku-36% ngo-2019 yaya ku-40% ngo-2021, futhi ixhashazwa yimakethe yezicelo ekufuneni njalo ama-niches okukhiqiza lapho inganikeza khona izinsizakalo zayo.
Futhi hhayi kuphela kusuka kuma-niches okukhiqiza, lezi zinhlelo zokusebenza zisebenzisa nezinye izinhlobo ze niche ngokwezithakazelo, izinhlanga ngisho nezinkolo. Namuhla kunezicelo zokuphola zawo wonke umuntu, nakuba lapho sishiya okuthandwa kakhulu singathola ukuntuleka kwabasebenzisi.
Njengoba sesishilo, eziningi zalezi zinhlelo zokusebenza zisebenza ngaphansi kwe-dynamics esheshisiwe lapho kwanele khona swayipha isithupha sakho esikrinini ukukhetha i-aphoyintimenti elandelayo. Sikhuluma, isibonelo, mayelana nezinhlelo zokusebenza ezifana ne-Tinder noma i-Bumble, lapho kungowesifazane okufanele enze umnyakazo wokuqala.
Ngakolunye uhlangothi, olunye uhlobo lwe-apss luzenza izindawo zokungcebeleka nezinobungane. Lezi ngokuvamile zihloselwe ezindaweni eziqondile kakhulu, njengoba kwenzeka, isibonelo, i-Ourtime, egxile kulabo abangaphezu kweminyaka engama-50 ubudala. lapha i ukukhethwa kwamakhandidethi inikezwa ngokuhambisana ngemva kokuphendula uhlu lwemibuzo oluphelele futhi wonke amaphrofayili aqinisekisiwe, okusho ukuthi uhlelo lokusebenza luqinisekisa ukuthi umuntu omelwe kuphrofayela yedijithali uhambelana nomuntu osemhlabeni wangempela.
Kukhona ama-aps lapho abasebenzisi ikakhulukazi bafuna ukuhlangana okuvamile noma okocansi kanye nokunye lapho ubudlelwano bubekwa phambili phambili. Okudumile kakhulu, nokho, phendula kuwo wonke lawa maphrofayili, ngaleyo ndlela ahlanganise abasebenzisi abahlukahlukene.
Okudume kakhulu eSpain
Edarling futhi Meetic Ziseyizingosi ezivakashelwa kakhulu eSpain. Kokubili kusekelwe ekwenziweni komentshisi ukuphakamisa ozakwethu, okukusiza ukuthi uthole abantu abahlobene ngokwengqondo nabahambisanayo. Nginesiqiniseko sokuthi uzosazi isiqubulo sokuqala: sokufuna abantu abangabodwana.
Eyesibili, i-Meetic, ingeyeQembu Lokufanisa elibusa isikhala sokuthandana ngezinhlelo zokusebenza ezifana ne-Tinder, Hinge, Inala Yezinhlanzi, OK Cupid, Ourtime noma Match. Phakathi kwalokhu Tinder iyona ethandwa kakhulu, ukuba phakathi phezulu 3 ethandwa kakhulu ukuphola izinhlelo zokusebenza emazweni ahlukene njenge-US, UK, Germany, France, Spain and Italy.
Ngokwezilinganiso ezihlukahlukene, i-Match Group yenza ngaphezu kuka-56% wesamba sokulandwa kwezinhlelo zokusebenza zokuqomisana, kulandele iqembu le-MagicLab, elingabanikazi. bumble and badoo, omunye ethandwa kakhulu ukuphola izicelo eSpain.
Uma ufuna ukuhlangana nabantu abanezintshisekelo ezifanayo endaweni yangakini, yenza abangani noma ufune ubudlelwano, lezi zicelo zokuqomisana ziyi- okunye okudijithali kulezo ezinye izindlela zendabuko kanye nezokubhekana ubuso nobuso zokwenza izinto. Funda izincazelo zabo, bhalisela ezimbalwa zazo bese uzama.
Khumbula ukuthi ukuhlangana nabantu ngale ndlela kungaba intela kakhulu. Kuthatha isikhathi ukusesha ukuze uthole amaphrofayili afanayo e-priori, angangeni nje kithi ngokubona kodwa nangalokho akushoyo. Futhi, uma sebetholakele, abanayo njalo imigomo efana neyethu. Uma inhloso yethu icace kakhulu, ingadala ukukhungatheka ukuze sidlule esigabeni esifanayo ngokuqhubekayo.
Indlela ephelele ye-athikili: Bezzia » Indlela yokuphila » Izinhlelo zokusebenza zokuqomisana ziyaqhubeka nokukhula e-Spain
I-Body Mist: ukuthi iyini, isetshenziswa kanjani nokunye okuningi